တိုရွန်တို Deluxe ၏ Joanne Rourke သည်အလွန်မြင့်မားသောမြက်ပင်၌နှစ်မြှုပ်သောပရိသတ်များကိုကူညီသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Deluxe တိုရွန်တိုရဲ့ဂျိုအန်း Rourke က "မြက်ပင်ရှည်များကြား" immersive ပရိသတ်များကူညီပေး
Netflix နဲ့: - ပက်ထရစ် Wilson က Harrison Gilbertson, Laysla de Oliveira, Avery အတိုငျးကွီး - ဓာတ်ပုံ Credit အဆိုပါမြက်ပင်ရှည်များကြား
Deluxe တိုရွန်တိုရဲ့ဂျိုအန်း Rourke က "မြက်ပင်ရှည်များကြား" immersive ပရိသတ်များကူညီပေး
ထိတ်လန့် Maestro က Stephen King နှင့်ဂျိုးဟေးလ်အားဖြင့် novella အပေါ်အခြေခံပြီး, Netflix ၏ "မြက်ပင်ရှည်များကြား" ကြောက်မက်ဘွယ်သောအများ၏မကောင်းသောဇုန်သို့တစ်ဦးရောက်မည်ကိုစိုးရိမ်သည်လယ်ပြင်ပြောင်းလဲ။ ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့အော်ဟစ်ကြားနာပေါ်၌ညီအစ်ကိုတစ်ဦးနှင့်ညီမမှသာသူတို့ကမလွတ်မြောက်နိုင်ပါဘူးနားလည်သဘောပေါက်ဖို့, သူ့ကိုကယ်နှုတ်ခြင်းငှါရှည်မြက်၏လယ်ပြင်ရိုက်ထည့်ပါ။ ဒါရိုက်တာ Vincenzo Natalie နှင့်ရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင် Craig Wrobleski မြက်ပင်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသဖွယ်အရောင်သုံးပြီးရုပ်ရှင်၏နောက်ဆုံးကြည့်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရပါသည်မှ Deluxe တိုရွန်တိုရဲ့ဂျိုအန်း Rourke ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
သူကသူနှင့်အတူပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရန်အံ့သြစရာ, နှင့် Craig နဲ့အတူလုပ်ကိုင်ဖို့အခှငျ့ထူးခဲ့ဒါကြောင့်ငါသည်သူ၏ရုပ်ရှင်ဘို့ကျွမ်းကျင်ဗီဒီယို, 'Cube,' လုပ်ခဲ့တယ်သည့်အခါ "ငါကပို 20 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထက် Vincenzo အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဤစီမံကိန်းအပေါ်အရောင်ဖြစ်စဉ်ကိုမြင့်မားစွာပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်ကျနော်တို့အများကြီးစမ်းသပ်။ ဒါဟာအကြားသိမ်မွေ့ chromatic မူကွဲနှင့်အတူသဘာဝအများနှင့်နေသာသောနေ့ရက်ကာလကိုအပြင်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ဒီချဉ်းကပ်မှုထိတ်လန့်ဇာတ်ကားအဘို့အ atypical ဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, တကယ့်အရာတို့ကိုကော်လံကလွဲနေတယ်သွားကြဖို့စတင်တဲ့အခါမှာတစ်ဦးထက်ပိုမငြိမ်ခြင်းနှင့်နိမိတျဆိုးခံစားချက်မှသူ့ဟာသူချေးငှားသည်, "Rourke ကဆိုသည်။
"ဟုအဆိုပါမြက်ပင်ရှည်များကြား" အဓိကအားအဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင်ဇာတ်ကောင်မြက်ပင်များတွင်ပိတ်မိနေသည့်အခါတစ်ဦးထက်ပိုစွဲငြိဖွယ်ရာခံစားမှုပေးကူညီပေးခဲ့သည်ရာ, ထို ARRI Alexa LF ကင်မရာစနစ်အား အသုံးပြု. ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။ မြက်ပင်သည်သူ့ဟာသူ Rourke တစ်နေ့တာ၏အချိန်ပေါ် မူတည်. အဘယ်မှာရှိသနည်းဇာတ်လမ်းသည်ထိုလယ်၌အရပ်ဌာနတာခံခဲ့ရပါတယ်၏အရောင်ချိန်ညှိကြောင်းလက်တွေ့ကျတဲ့နှင့် CG မြက်တစ်ဦးရောနှောဖွဲ့စည်း။ ညဉ့်ကိုမြင်ကွင်းများဘို့, သူမမြင်နိုင်အလုံအလောက်အသေးစိတ်ကိုနှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှမှောင်မိုက်ခြုံငုံကြည့်စောင့်ရှောက်နေစဉ်ရိုက်ကူးနေတဲ့ငွေရောင်ကြည့်ပေးခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ သူမလည်းမှောင်မိုက်အရိပ်ဟာလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ရော့ခ်စောင့်ရှောက်ဖို့အောက်မေ့ခဲ့သည်။
Rourke pass ကိုချုံ့ထားတဲ့ SDR ဖန်တီးသောဗားရှင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့, HDR အတွက်ရုပ်ရှင်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအရောင် pass ပြီးစီးခဲ့သည်။ သူမသည်ညဥ့်မြင်ကွင်းများထဲမှာမလိုချင်တဲ့ specular ပျေါလှငျအတွက်ဇက်ကြိုးထိန်းခံရဖို့ဒီရုပ်ရှင်အပေါ် HDR အတွက်အလုပ်လုပ်၏အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီကိုထိန်းညှိဖို့သူမကရိုက်ချက်များ၏မကြာခဏ window ကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဒေသများ, အစွန်းရောက်ဖို့ကြည့်တွန်းအားပေးခြင်းမရှိဘဲ HDR ၏အကျိုးကျေးဇူးများရေးအတွက်တစ်ခုချဉ်းကပ်လို။
"ဒီပရောဂျက်ကိုအပေါ်ပါဝင်ပတ်သက်လူတိုင်းအသေးစိတ်ရန်စိတ်အားထက်သန်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ဒါကြောင့်ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောအတွေ့အကြုံအတွက်ဖန်ဆင်းသော, စီမံကိန်း၏နောက်ဆုံးကြည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ပါတယ်," Rourke ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ "ငါသည်များစွာသောအကြိုက်ဆုံးရိုက်ချက်များရှိသည်, ငါမူကားမြေပြင်ပေါ်တွင်အသေကောင်ကျီးကန်း၏အမြင်အာရုံဿုံငွေခံစားဖမ်းယူဘယ်လောက်ချစ်ကြတယ်။ Craig နှင့် Vincenzo ထိုကဲ့သို့သောရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပုံရိပ်များကိုဖန်တီး, ငါစီးဘို့တလျှောက်ဖြစ်ရုံပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကိုယ့်ဦးခေါင်း squishing ဒါ gleeful နှင့်ပျော်စရာဖြစ်နိုင်ကြောင်းမျှစိတ်ကူးရှိခဲ့ပါတယ်။ "
"လယ်သမားကသူတို့ချစ်ရာသခင်သည်လယ်ပြင်ထိန်းလိုပဲ, ဂျိုအန်းနှင့် Deluxe တိုရွန်တိုငါ့အလိုရှိသမျှရုပ်ရှင်၏အလှဆုံးသို့ကြီးထွားက 'မြက်ပင်ရှည်များကြား' 'ကိုဖန်ဆင်း," ဒါရိုက်တာ Vincenzo Natalie ကဆိုသည်။
"ဟုအဆိုပါမြက်ပင်ရှည်များကြား" ယခု Netflix အပေါ် stream မှရရှိနိုင်ပါသည်။ ပိုပြီးအချက်အလက်အဘို့, သွားရောက်လည်ပတ်: www.netflix.com/title/80237905
ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော လှံ & Arrows 2019-10-07
ယခင်: 1 ကို Global အရောင်း၏ VP ခန့်အပ်ကိုယူ
နောက်တစ်ခု: Densitron အင်တာမီလန်ပျား2မှာ UReady 2019U Display ကို